China Q345B ERW Round Simbi Pipe YeEcuador fekitori nevagadziri |Zhanzhi
ERW Pipe inomirira Electric Resistance Welded Pipe, ine mutengo wakanaka uye kushivirira kwepedyo kwemadziro ukobvu kana uchienzaniswa nesimbi isina musono pombi.Inoshandiswa zvakanyanya mu fencing, scaffolding, engineering, etc. Kuti tive nechokwadi chepamusoro uye kunaka kweERW Pipe, SMC yedu inoshandisa zvigadzirwa zvepamusoro, uye ine hutsika hwehutongi hwehutsika.
1) Giredhi: Q345B, API X42-X80, L245, J55
2)Kunze Diameter: Φ219-Φ660mm
3) Rusvingo Ukobvu: 6-22mm
4) Kureba: 3-12m, yakagadzirirwa
5) Muedzo: hydro yekuongorora, ultrasonic kutariswa, ultrasonic kuyedzwa kwepombi kupera, kuona uye chiyero chekuongorora, kuyera uye kuyera, nezvimwe.
Resistance welding ine hunhu hwekugadzirwa kwakanyanya, mutengo wakaderera, kuchengetedza zvinhu uye nyore otomatiki, saka inoshandiswa zvakanyanya mundege, aerospace, simba, zvemagetsi, mota, indasitiri yemwenje uye mamwe maindasitiri, uye ndeimwe yeakakosha maitirwo emagetsi. .Musiyano mukuru pakati peERW simbi pombi nesimbi isina musono pombi ndewekuti ERW ine weld, inovawo kiyi yemhando yeERW simbi pombi.ERW pombi i "high-frequency resistance welded steel pombi", iyo yakasiyana neye welding process yewakajairika welded pombi.Iyo weld inogadzirwa nekunyungudutsa simbi yesimbi yesimbi strip muviri, uye kusimba kwayo kwemuchina kuri nani pane iyo yakajairwa welded pombi.
1) Economy Benefit: ERW simbi pombi isingadhuri pane seamless simbi pombi.
2) High Precision: ERW simbi pombi ine padyo kushivirira kwemadziro ukobvu kana ichienzaniswa nesimbi isina musono pombi.
ERW simbi pombi inoshandiswa nevakawanda mundege, aerospace, simba, zvemagetsi, motokari, chiedza indasitiri uye mamwe maindasitiri sectors.ERW simbi pombi inoshandiswa kutakura oiri, gasi rechisikigo uye zvimwe mhute-mvura zvinhu, izvo zvinogona kusangana zvakasiyana-siyana zvinodiwa pamusoro uye kuderera kudzvinyirira.Parizvino, inoita basa rinokosha mumunda wekutakura mapaipi munyika.